Foddaa Ajajoota keessaa baafata halqara baniitii, Amalootafiladhu
Amala faankishinii kana gadii ibsuu keessattii, qubeen "a" sajoo keessaa iddooqa atii amala dhaahamutti itti ramaduu barbaaddu agarsiisa. Arfii kana arfii biroo filattee kamiiniyyuu bakka buusu ni dandeessa.
Malduu mirgaa iddooqa waliin saagi. Dabalataan acute <?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.
Iddooqa waliin malduu bitaa (bitaa) saagi. Dabalataan grave <?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.
Iddooqa waliin hoxxee faallaa ("mallattoo filannoo") irra jiru saagi. Dabalataan check <?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.
Malduu olgaraa iddooqa waliin saagi. Dabalataan breve <?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.
Iddooqa geengoon irraa jiru saagi. Dabalataan circle <?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.
Xiyya karqabee waliin iddooqa saagi. Dabalataan vec <?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.
Dalduufaa waliin iddooqa saagi. Dabalataan tilde <?> foddaa Ajajoota keessattis barreessuu ni dandeessa.
Hoxxee ("hat") waliin iddooqa saagi. Foddaa Ajaja keessatti kallattiin hat <?> galchuu ni dandeessa.
Iddooqa sarara ("kabala") irraani saagi . Dabalataan bar <?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.
Iddooqa tuqaa irraa waliin saagi. dabalataan dot <?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.
Iddooqa waliin xiyya karqabee balla'a saagi. Foddaa Ajaja keessattis widevec barreessu ni dandeessa.
Iddooqa waliin dalduufaas balla'a saagi. Foddaa Ajaja keessattis kallattiin widetilde barreessu ni dandeessa.
Iddooqa waliin hoxxee ("hat") balla'a saagi. Foddaa Ajaja keessatti widehat barreessu ni dandeessa.
Iddooqa tuqaan lama irra jiru saagi. ddot <?>foddaa Ajajoota keessatti kallattiin galchuu ni dandeessa.
Iddooqa sarara jalaa saagi. Dabalataan underline <?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.
Iddooqa sarara hulluqa (ykn sarirraa) waliini saagi. Dabalataan overstrike <?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.
Iddooqa irra tuqaale sadii saagi. dddot <?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.
Arfii iftoomaaf iddooqa saagi. Arfiin kun iddoo "a" fudhata garuu hin agarsiisu. Dabalataan phantom <?>foddaa Ajajoota keesstti barreessuu ni dandeessa.
Iddooqa dhangessu yabbuu waliin saagi. Dabalataan bold <?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.
Iddooqa dhangessu mirgadaa waliin saagi. Dabalataan ital <?> ykn italic <?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.
Hamamtaa bocquu fooyyessuuf ajaja iddooqa lamaan saagi. Iddooqi inni jalqabaa hamamtaa bocquu agarsiisa (fakkeenyaaf, 12) fi inni lammata barreefama qabateera. Caasaa sirridhaaf, gatiilee gidduu iddoo saagi. Dabalataan size <?> <?> kallattiin foddaa Ajajoota keessatti galchuu ni dandeessa.
Gosa bocquu jijjiruuf ajaja iddooqa lamaan saagi. Iddooqa isa jalqabaa maqaa tokkoo bocquu maamiloo keessa, Serif, Sans ykn Fixed bakka buusi. Iddooqa isa lamaffaa barreefamaan bakka buusi. Dabalataan font <?> <?> kallattiin foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.
Halluu foormulaa keetii jijjiruuf ajaja halluu fayyadami. halluu barreessi, ittaansuun maqaa halluu (halluuleen jiran adii, gurraacha, hallataa, maagneetaa, diima, cuquliisa, magariisa and keelloos) barreessi, ittaansuun foormulaa, arfii ykn tarree arfii barreessi. Naqaan halluu magariisa hagamta 20 a qubee "a" magariisa bocquu hagamta 20 buusissas.
Ajajni nbold fi nitalic bocquu yabbuu ykn bocquu durtii mirgadaa qaamota foormula haqa. Fakkeenyaaf, foormulaa 5 x + 3=28 keessaa mirgada x irraa haquuf fuuldura x tti nitalic barreessi akka 5 nitalic x + 3=28 keessatti.
amalootni kun "acute", "bar", "breve", "check", "circle", "dot", "ddot", "dddot", "grave", "hat", "tilde" fi "vec" hagamta dhaabataa qabu. Yemmu mallattoo dheera gubba qubachiisamani yabbinni fi dheerinni isaani hin mijeefamu.
Jijjirraa hamamtaaf size n, +n, -n, *n fi /n fayyadamu ni dandeessa, n iddooqa dha. Tooftaan kun kan fayyaduu yemmuu hamamtaan buu'ura foormulaa jijjirratti saaxilamu dha. Ajajni size +n fi size -n hamamtaa tiqaa jijjira, size *n fi size /n immoo hamamtaa dhibbeentaan jijjira. Fakkeenyaaf, ajajni size *1.17 hamamtaa arfii sirrumaan 17% dabala.
Caasaa sirriif galiinsi tokko tokkoo iddoo barbaadu. Kun keessumayyuu kan dhugoomu yoo atii amaloota iddooqarra gatii dhaabbataatiin ifteessiteedha.
Odeefannoon amaloota, kaasalee fi eksiponeentii, fi madaaluu irraa shaffisaan galmee kee caasessuuf sii gargaara.
Title is: Amaloota